लकडाउनमा दम्पत्ती मस्त, डेटिङ जोडीलाई कष्ट : कोही भिडियो सेक्स गर्दै, कोही भ्वाइसमै काम चलाउँदै « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
लकडाउनमा दम्पत्ती मस्त, डेटिङ जोडीलाई कष्ट : कोही भिडियो सेक्स गर्दै, कोही भ्वाइसमै काम चलाउँदै
१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार १०:१३
विश्वको एक चौथाई जनसंख्या लकडाउनमा रहेका बेला डेटिङ र सेक्समा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । जारी लकडाउनको समयमा दम्पत्ती मस्त छन् भने डेटिङ जोडीलाई यौन जीवनकमा कष्ट भएको छ ।
यतिबेला कोही भिडियो सेक्स गर्दैछन् भने कोही भ्वाइस सेक्समै काम चलाउँदै छन् । खुला समयमा पनि डेटिङ गर्नमा कठिनाइ आउँछ ।
चीनदेखि लिएर बेलायतसम्म, नेपाल, भारतदेखि स्पेन र सिंगो युरोपसम्म हरेक स्थानमा सामाजिक दूरीको अभ्यास गर्नुपरेको छ अहिले ।आमरूपमा परिचित मान्छेले जस्तो व्यवहार हुने गरेको थियो, त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार सिक्नुपरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा संसारभरमा डेटिङ र सम्बन्धमा समेत असर परेको छ । विवाहितहरूको याैन जीवनमा त्यति धेरै असर नपरे पनि प्रेम सम्बन्धमा भएकाहरूलाई भने लकडाउनले समस्या पारेको छ ।
संसारका ५ अलग अलग स्थानका ५ व्यक्तिले आफ्नो डेटिङबारे आफ्नो कहानी यसरी बताएका छन् ।
सोफी, २७ वर्ष, साङ्घाई, चीन
हान लकडाउन लगाउनुभन्दा १ साताअघि ब्वाई फ्रेन्डसँग मेरो ब्रेकअप भएको थियो । यसपछि चीनको अर्को शहरमा पनि यस्तै प्रकारको प्रतिबन्ध लाग्यो ।
यस्तो हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन । यो मेरा लागि कठिनाइको क्षण थियो किनकि यस्तो कठिन अवस्थालाई मैले एक्लै झेल्नुपर्‍यो ।
यस्तो अवस्थामा मैले डेटिङ एप्सको सहारा लिएँ । आफ्नो अपार्टमेन्टमा आफ्नो बिरालोसँग बसेर डेटिङ एप्सलाई ‘लेफ्ट राइट स्वाइप’ गर्नु एक प्रकारको मनोरञ्जनको साधन बन्यो । तर, यसबाट वास्तविकतामा तपाईंले कुनै चिजलाई पुष्टि गर्न सक्दैन ।
म घन्टौँसम्म केटाहरूसँग कुराकानी गर्छु । सबै रेस्टुराँ र सार्वजनिक स्थानहरू बन्द रहेका छन् । यदि हामीले खुला भएका क्याफे खोज्छौँ भने हरेक क्षेत्रमा मास्क लगाएर बस्नुपर्छ । यसबाट डेटिङको कुनै अर्थ रहँदैन ।
यस्तो लागिरहेको छ कि तपाईं पूर्ण रूपमा एकान्तमा हुनुहुन्छ र एकान्तवासमा नै भइन्छ जस्तो लाग्छ । यो सुरक्षित पनि छ तर कुनै समयमा कुनै साथीलाई भेट्न, छुन र महसुस गर्न मन लाग्छ ।
जुन व्यक्तिसँग तपाईं डेटिङ गरिरहनुभएको छ, उसका बारेमा जान्न पनि कठिन हुने रहेछ । अनलाइन डेटिङमा कोरोना भाइरस फैलिएको समयमा कठिनाइ बढी हुन्छ ।
तपाईं एक अपरिचित मानिससँग कसरी भेट्नुहुन्छ ? कोरोना भाइरसबाट मुक्त छ या छैन भन्ने जानकारी नभई भेट्न सकिँदैन । यो झनै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
म डेटिङ एप्सबाट पनि बिदा लिँदै छु किनकि यहाँबाट केही प्राप्ति हुँदैन । इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने अहिलेको अवस्था छिट्टै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
जेरेमी कोहन, २८ वर्ष, ब्रुकलिन, अमेरिका
आफ्नो अपार्टमेन्टमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा मैले आफूलाई व्यस्त राख्नका लागि आसपासका छतमा रहेका मानिसको तस्बीर खिच्न सुरु गरेँ । मैले यस्ता तस्बीरमा आधारित फोटो सिरिज नै सुरु गरेको छु ।
केही दिनअघि एउटी युवती छतमा नाचिरहेकी देखेँ । उनको इनर्जीले मलाई आकर्षित गर्‍यो । म आफ्नो बाल्कोनीमा गएंँ र हातले इसारा गरेँ, उनले पनि इसारा गरिन् ।
मलाई त्यसै समयमा हामीबीच सम्बन्ध रहेको महसुस भयो र मेरो इच्छाले उनलाई सम्पर्क हुन थाल्यो । जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय । मैले ड्रोन लिएँ र मेरो फोन नम्बरसहित नोट लेखेँ र फ्याँके । ड्रोनले उनको छतमा पुर्‍यायो ।
१ घन्टापछि उनको ‘टेक्स्ट म्यासेज’ आयो र हाम्रो कुराकानी सुरु भयो । मैले उनीसँगै बस्ने साथीका माध्यमबाट डेटको योजना बनाएँ । तर, यो अलग डेट थियो- उनी आफ्नो छतमा थिइन्, म आफ्नो छतमा थिएँ ।
दुवै जना एक समान बसाइमा थियौँ- एउटा सानो टेबल, वाइन र खाना । यो डेटमा हामीले पूरै समयसम्म फेसटाइम भिडियो कल गरिरह्यौँ । हामी एकअर्कालाई देख्न सक्थ्यौं र एकअर्कालाई इसारा गर्न पनि सक्थ्यौँ ।
हाम्रो दोस्रो डेट अनलाइन बबलमा भयो । म वास्तविकतामा लाइन क्रस गरेर विना लाइन एकअर्काको नजिक जान चाहन्थेँ । मैले आफ्नो कहानी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेँ र यो भाइरल बन्यो ।
यदि लकडाउन थिएन भने यो सम्भव थिएन । म एक जना राम्रो साथी पाएर धेरै खुसी भएको छु ।
क्लारेसी, ३५ वर्ष, किनसासा, डीपीआर कंगो
कोभिड- १९ को संक्रमण संसारमा खतरा बन्नुभन्दा अघि म कसैसँग क्याजुएल सम्बन्धमा थिएँ । हामी दैनिक एकअर्कालाई भेट्ने गर्थ्यौं तर म मानसिक रूपमा यो सम्बन्धमा जोडिन चाहन्नथेँ ।
म यसलाई विस्तारो गतिमा लैजान चाहन्थेँ तर कसले यस्तो हुन्छ भन्ने सोचेको थियो र ? यो समयमा कंगोमा लकडाउन छैन तर म स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छु ।
मैले भाइरसको खतरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएकी छु । यस कारण मैले ४ साताका लागि नभेट्ने निधो गरेँ । मैले उसलाई यो किन जरुरी छ भनेर सम्झाएँ ।
तर, उसले मलाई अरू कसैसँग भेट्न बहाना गरेको ठान्छ र यो कुराले ऊ पागल जस्तै भएको छ । म पनि उसको कमी महसुस गर्छु र मैले कसैलाई मेरो जीवनमा कसैलाई स्थायी रूपमा सामेल गर्ने मौका गुमाइरहेकी छु ।
उसले मलाई पर्खिंदैन भन्ने कुराको डरले सताइरहेको छ । म शारीरिक अन्तरङ्गताको कमी महसुस गरिरहेकी छु । हामी सबैलाई शारीरिक सम्बन्धको चाहना हुन्छ ।
यस्तोमा वैकल्पिक बाटो खोज्छन्, मेरो ब्वाइफ्रेन्डलाई यो कुरा थाहा थियो र उनले आफ्नोतर्फबाट राम्रो सम्बन्ध बनाउन कोसिस गरेका थिए ।
यसले मलाई दुःखी बनाएको छ । अब उनी मसँग धेरै कुराकानी पनि गर्दैनन् । मेरो म्यासेजको उत्तर पनि लामो समयपछि मात्र दिन्छन् । म उनलाई पनि भाइरसबाट बचाउन खोजिरहेकी छु । तर, यही सङ्कटमा हाम्रो सम्बन्ध टुट्ने डर भइरहेको छ ।
देवास्मिता, २४ वर्ष, नयाँ दिल्ली, भारत
मैले मेरो ब्वाइ फ्रेन्ड सँग ३ महिनादेखि डेटिङ गरिरहेकी छु । हामी एउटै शहरमा छौँ भन्ने कुराले मात्र मलाई केही सान्त्वना दिन्छ किनकि यसअघि हामी टाढा थियौँ ।
म कुनै मान्छेसँग यति धेरै माया गर्छु र समय बिताउन सक्छु भन्ने कुराले खुसी थिएँ । हामी एउटै अफिसमा काम गर्ने दैनिक भेट्थ्यौं । यो सबै भगवानको कृपा जस्तो लागिरहेको छ ।
अचानक लकडाउन सुरु भएपछि हामीबीचको सम्बन्धमा लामो दूरी पैदा भएको छ । हामी छुट्टिनका लागि मानसिक रूपमा पनि तयार थिएनौँ ।
हामी दिनमा ६ पटकसम्म भिडियो कल गर्छौं । हामी कुराकानी गर्दै फिल्म हेर्छौं । क्विज खेल्न मन लागेको बेला अनलाइन क्विज खेल्छौँ ।यस्ता तरिकाले हामी अलग रहेर पनि एक साथ हुने कोसिस गरिरहेका छौँ ।
यस्तो अवस्था देखेर हामी हाँस्छौँ पनि । यो सङ्कटबाट बाहिर निस्किएपछि हामीले प्रेमसम्बन्धको सुरुवातमै कत्रो चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो भन्ने सुनाउनेछौँ ।
जुली, २४ वर्ष, इलिगन सिटी, फिलिपिन्स
म पछिल्ला २ महिनादेखि टिन्डरमा छु । कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुनुअघि म कुनै पुरुषसँग डेटिङ जान्थेँ । अब समय हाम्रो छैन । कसैलाई भेट्न सक्दिनँ र मेरो सेक्स जीवन नै ‘बोरिङ’ भइरहेको छ ।
म आफ्नो शारीरिक चाहना पूरा गर्नका लागि केही गर्न नसक्दा निराश छु । तर, म यतिबेला मोबाइलमा डेटिङ एप्समा सक्रिय छु । म पुरुषसँग कुरा गर्छु । हामीले भिडियो कल गर्छौं र साइबर सेक्स पनि ।
यसरी हामी आफ्नो यौन चाहना पूरा गर्छौं । यो वास्तविक नभए पनि हामीसँग विकल्प पनि छैन । म यी पुरुषहरूसँग भेट्न चाहन्छु तर हामीसँग घरबाट बाहिर निस्कन सवारी साधन छैन ।
विश्वविद्यालयको छात्रावासमा एक्लै बस्नुपरेकाले पनि मलाई गाह्रो भइरहेको छ । यस्ता दिनमा यौन चाहना बढी हुन्छ । हामीले सायद केही समय यसरी नै बिताउनुपर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार १०:१३
साउण्ड अफ हिमालय संस्थाद्वारा एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई राहत वितरण
एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई आश्रय दिँदै आएको सीतापाइलास्थित ‘पुनर्बल प्लस’ नामक सामाजिक संस्थालाई ५० हजार मूल्य
पाँच जनाको ज्यान जाने गरी पश्चिमरुकुमको सोतीमा भएको घटनाको स्थलगत अध्ययनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको
गण्डकी प्रदेशमा एघार सय ६० घरधुरीलाई सरकारी अनुदानमा सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका स्थानमा सरकारी अनुदानमा सौर्य